CJ Myanmar: July 2012
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJ-Myanmar
မန္တလေးမြို့၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်
ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီ ခွဲခန့်က ခင်စောမူ ဆီစက်ကွေ့ ဓာတ်ဆီဆိုင် အဝင်ပေါက်အနီး တောင်မှမြောက်သို့မောင်းနှင်လာသော ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲလဲကျနေစဉ်။
ကာတွန်း ဦးသော်က အမှတ်တရ ပြပွဲ ၂၀၁၂
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ CJM-583
ရန်ကုန် ၊ ဇူလိုင်လ (၂၇-၃၁) ရက်
ကာတွန်း ဦးသော်က အမှတ်တရ ပြပွဲ ၂၀၁၂27~31 July 2012
"မောင်းလျှင်မမူးနှင့် မူးလျှင် မမောင်းနှင့်"
မန္တလေးမြို့၊ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်
"မောင်းလျှင်မမူးနှင့် မူးလျှင် မမောင်းနှင့်" မန္တလေးမြို့ လမ်းဆုံလမ်းထောင့်များတွင် ယာဉ်အန္တရာယ်သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များထောင်ကာ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။ ဆိုင်းဘုတ်များတွင် မန္တလေးမြို့ပေါ်(၇) မြို့နယ်အတွင်း နှစ်အလိုက် ဖြစ်ပွားသော ယာဉ်တိုက်မှု၊ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရသူဦးရေ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယားနှင့်အတူ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူများ၏ သွေးသံရဲရဲ ဓာတ်ပုံများကိုပါ ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။ လမ်း ၃၀ နှင့် ၇၁ လမ်းထောင့်၊ ဗထူးကွင်းအနီးတွင်လည်းကောင်း၊ ၆၆ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထောင့်တွင်လည်းကောင်း အလားတူဆိုင်းဘုတ်မျိုးအား စိုက်ထူထားသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟု မန်းပြည်သူတစ်ဦးက CJMyanmar သို့ ပြောကြားပါသည်။
မန္တလေးမြို.ကိုင်းတန်းဈေးသူဈေးသားများကို မူလရောင်းချရာမှ နေရာသစ်ဖြစ်သော ၄၁လမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းထောင့်ရှိ ကုန်စိမ်းဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရောင်းချစေသဖြင့် ဈေးသူဈေးသားများမှ ကျေနပ်မှုမရှိသောကြောင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM-
မန္တလေးမြို့ ဇူလိုင်လ　(၃၀)ရက်နေ့ည၁၀နာရီအချိန်တွင် ကိုင်းတန်းဈေးသူဈေးသားများကို မူလရောင်းချရာမှ နေရာသစ်ဖြစ်သော ၄၁လမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းထောင့်ရှိ ကုန်စိမ်းဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရောင်းချစေသဖြင့် ဈေးသူဈေးသားများမှ ကျေနပ်မှုမရှိသောကြောင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြပါသည်။
ကြိုတင်လျှောက်ထားမှုမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ယခုအခါ တာဝန်ရှိအာဏာပိုင်းများရောက်ရှိနေပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူ လူအင်အား၃၀၀ခန့်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
ဂီတမိတ်မန္တလေးရဲ့ Music around the World
မန္တလေးမြို့၊ ဇူလိုင်လ (၂၉)ရက်
ဂီတမိတ် (မန္တလေး) နှင့် မန္တလေးမြို့ခံ ဂီတပညာရှင်အချို့တို့သည် သြစတြီးယားမှ စန္တယားဆရာ Goesta Muller နှင့် တယောဆရာမ Gaebrillei တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး Music Around The World အမည်ဖြင့် Recital ဖြေဖြော်ပွဲကို ၂၀၁၂ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ၂၉ရက်နေ့ ညနေလေးနာရီမှ စတင်ပြီး ဂီတမိတ် (မန္တလေး)တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
တို့.....ရင်ထဲကမန္တလေး ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုရဓာတ်ပုံများ
မန္တလေးမြို့၊ ဂျူလိုင်လ (၃၀)ရက်
Naing Group နှင့် အထက်မြန်မာပြည်ဓာတ်ပုံအသင်း(မန္တလေး) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော တို့......ရင်ထဲကမန္တလေး ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ ဓာတ်ပုံပညာရှင်(၂၀၂)ဦးက ဓာတ်ပုံပေါင်း(၇၆၂)ပုံ ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ၊ အဆိုပါပြိုင်ပွဲဝင်ပုံများအား အကဲဖြတ် ဒိုင်(၇)ဦးပါဝင် သောဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ဇူလိုင်(၂၈)ရက် စနေနေ့က မန္တလေးမြို့ ၇၈ လမ်း ရှိ Naing Group အဆောက်အအုံမှာ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး၊ ယနေ့ ဇူလိုင်(၃၀)ရက်နေ့မှာ အထက်မြန်မာပြည်ဓာတ်ပုံအသင်း(မန္တလေး) က ဆုရဓာတ်ပုံများအား ပြိုင်ပွဲဝင်စည်းကမ်းနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိ စိစစ်ကာ ဆုရ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များအား အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင်..................ပထမ-အောင်အောင်(နန်းရှေ့)၊ဒုတိယ-ထွန်းထွန်းဝင်း(ချယ်ရီဝင်း)၊ တတိယ-ထက်ဦးဇော်(စိုင်ပြွန်)၊နှစ်သိမ့်(၁)-ညီညီ(စမိုင်း)၊နှစ်သိမ့်(၂)-ဘာမျူဒါသက်နိုင်၊ နှစ်သိမ့်(၃)-ကျော်ဝင်းလှိုင်(ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်)၊နှစ်သိမ့်(၄)-ထက်ဦးဇော်(စိုင်ပြွန်)၊ နှစ်သိမ့်(၅)-ရဲလင်းထွန်း(လှသရဖူ)တို့က ရရှိကြပြီး၊ ဆုပေးပွဲကို သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့၊ ဇူလိုင်လ (၂၈)ရက်
မန္တလေးမြို့၇၂လမ်း၊၃၇x၃၈ကြားရှိ စီးတော်မြင်းဝန်ကျောင်းတိုက်၌် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဆရာများအစည်းအရုံးကို ၂၈.၇.၂၀၁၂နေ့ လယ် ၁နာရီတွင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။ယင်းအဖွဲ့ အစည်း တရားဝင် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရှေ့အပတ်ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ တွေ ဆီကို စာတင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ ပရိယတ္တိသာသနဟိတအသင်း၏ (၁၀၆)ကြိမ်မြောက် နယုန်လစာအောင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM013
မန္တလေး ၊ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်
မန္တလေးမြို့ ပရိယတ္တိသာသနဟိတအသင်း၏ (၁၀၆)ကြိမ်မြောက် နယုန်လစာအောင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ၂၆.၇.၂၀၁၂နေ့လယ်၁၂နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသော စာမေးပွဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး ယခုနှစ်တွင် သီးခြားစာချတန်းကျမ်းအပြည့်အောင်(၅)ပါးနှင့် သီးခြားစာသင်တန်းအောင်(၄)ပါး စုစုပေါင်း(၉)ပါးအောင်မြင်တော်မူသဖြင့် စာအောင်ဘွဲ့လက်မှတ်နှင့် ပဒေသာပင်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါသည်။ ရပ်ကွက်အသီးသီး အသင်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ ပဒေသာပင်များကပ်လှူခြင်း၊ ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်ပရိသတ်များကို အကျွေးအမွေးဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့ပါသည်။
မြစ်သားမြို့နယ် လူထု ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်
မြစ်သားမြို့၊ ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်
အစိုးရသစ်လက်ထက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့်ဥပဒေ နည်းဥပဒေ များထွက်ရှိပြီးနောက် အထက်မြန်မာပြည်တွင် ပထမဦးဆုံးအဖြစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သားမြို့နယ်လူထုမှဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ခုကို ယနေ့ ဇူလိုင်(၂၅)ရက် နံနက် က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲသို့ လူအင်အား (၁၀၀)ဦး ပါဝင်သော လူထုက တရားဝင် ခွင့်ပြုမိန့် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပန်းလောင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော စမာ ရေလွှဲဆည်ကြောင့် ရေကြီး ရေလျှံ မှု များ အဖြစ်များလာကြောင်း၊ စမာ ရေလွှဲဆည် အနေဖြင့် မြစ်သားမြို့နယ် လူထု အကျိုး ထက် ဆိုးကျိုးအပစ်ကို ပိုမိုရရှိ စေသည် ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ယခုလို ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်ပွဲမှ လူထုက CJ Myanmar သို့ပြောကြားသည်။
အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား ဂန္ဓကုဋီတိုက် အောက်တိုဘာလကုန်ပြီးစီးနိုင်
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM-999
မန္တလေးမြို့၊ ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်
မန္တလေးမြို့၊ မဟာလောကရန်နှိမ် အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားအတွင်း ဂန္ဓကုဋီတိုက် တည်ဆောက်နေမှုကို အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းတွင် ပြီးစီးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အောင်မြင်သူဆောက်လုပ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ CJ Myanmar သို့ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ တည်ဆောက်မှုကို အောင်မြင်သူဆောက်လုပ်ရေးမှ ငွေကျပ် ၁၀၈သိန်း မတည်လှူဒါန်းပြီး အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေများဖြင့် ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ပေးနေကြောင်းလည်း သိရသည်။ အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည် မန္တလေးမြို့ရှိ တန်ခိုးကြီးမြတ်စွာဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်ဆွေးနွေး
နေပြည်တော်　ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ် တင်သွင်းသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် ပြဌာန်းပေးရန် အဆိုကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ဆွေးနွေး ပုံကို Sky Net Channel ၏ ထုတ်လွှင့်မှုအား ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်အပ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့် ဥပဒေပြဌာန်းရန်" အဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု စာသားအပြည့်အစုံ
ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ်၏ "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့် ဥပဒေပြဌာန်းရန်"
အဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု စာသားအပြည့်အစုံ အား CJ Myanmar မှဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
လေစားအပ်ပါသော လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်။
ကျမက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကောမှုးမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
အခု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှာဆိုလို့ ရှိရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဆိုတဲ့
ဝေါဟာရကိုသတ်သတ် မှတ်မှတ် အဓိပ္ပယ်ဖေါ်ထားတာမရှိပါဘူး။၁၉၈၂ ခု နှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေမှာဆို-ရင်တော့ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ၁၈၂၃
ခုနှစ်ကစပြီး ဒီနေ့ နိုင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးများကိုဆိုလိုတာလို့ အဓိပါယ်ဖေါ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဗမာတွေလည်းပါပါတယ်။
အခု ဆွေးနွေးချက်တွေ အ၇ဆိုရင် ပြည်နယ်တွေကို အခြေခံတဲ့
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့် အရေးတွေ ကိုရည်ညွန်းပြီးတော့
ပြောကြတယ်လို့ ကျမတို့ မှတ် ယူရပါတယ်။
လို့ အဆိုးဝါးဆုံးဒေသတွေ ဟာပြည်နယ်ဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ် ဆိုလို့ရှိရင်ခု နောက်ဆုံး အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ် ရဲ့ကိန်း
ဂဏန်းအရ ၇၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း ၊ရှမ်းအရှေ့ဆိုလို့ရှိရင် ၄၆.၄ရာခိုင်နှုန်း ။ရှမ်းမြောက် ဆိုရင် ၃၇.၄ရာခိုင်နှုန်း။ရှမ်းတောင် ဆိုရင် ၂၅.၂ ရာခိုင်နှုန်း
ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုနုန်း ဟာ ၃၃.၁
ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အခြေနေကတော့ ၄၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ပျမ်းမျ ဆင်းရဲမွဲတေမှု နှုန်းဟာ ၂၅. ၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တာကြောင့်မို့ ဒီပြည်နယ်တွေမှာပျမ်းမျှခြင်း
နိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းမြင့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထို့အတူပဲ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း ၂၈. ၆ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပျမ်းမျှခြင်းရာခိုင်နှုန်းထက် မြင့်နေပါတယ်။
မွန်ကယားနဲ့ ကရင်တို့ကတော့ ပိုပြီးတော့ နိမ့်ကျနေတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်း
အခြေနေဟာ ကြေနပ်ဖွယ်ရာ မရှိဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ထို့အပြင်လည်း ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်မီးလုံးဝ ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာ
ပါတယ်။ဒါကိုထောက်ထားပြီးတော့ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကွာခြား
လို့မရတဲ့၊ ခွာလို့ မရတဲ့ တန်းတူ ညီမျှရေး အပြန်အလှန် လေးစားယုံကြည်ရေး
တို့ကို အခြေခံပြီးတော့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ထွန်း
လာရေးအတွက် ကျမတို့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး ဆွေးနွေး
ညှိနိုင်းပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ အခွင့် အရေးများကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့
အတွက်ဥပဒေများကိုလိုအပ်သလို ပြုပြင်ခြင်း ၊လိုအပ်သလို
ပြဌာန်းခြင်းတို့ များဆောင်ရွက် ဖို့ ရန်ကို တိုက်တွန်းရင်း ဦးတီခွန်မြတ်ရဲ့ အဆိုကိုကျမအနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ ၃၂လမ်းနှင့် ၃၅လမ်းကြားတွင် လမ်းပိတ်အဖြစ်တည်ရှိနေသော ၆၆-လမ်းအား လမ်းဖောက်လုပ်လျှက်ရှိ
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM-197
မန္တလေးမြို့၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ရက်
မန္တလေးမြို့ ကျုံးအရှေ့ဘက် ကပ်ရပ်လမ်းဖြစ်သော ၆၆-လမ်းသည် မြောက်ဘက် မန္တလေးတောင်ခြေမှ စတင်ခဲ့ပြီး ၃၂လမ်း အရောက်တွင် လမ်းပိတ် အဖြစ်တည်ရှိနေသော လမ်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ၃၂လမ်းမှ ၃၅လမ်းကြား လမ်းပိတ်အပိုင်းအား လမ်း အဖြစ် ဖောက်လုပ်လျှက်ရှိသည်။ ယင်းသို့ လမ်းဖောက်လုပ်မှုကြောင့် ယင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် ပညာရေး လေ့ကျင့်ရေး တက္ကသိုလ်မှ လမ်းအတွက် မြေသားနေရာ ပေးလိုက်ရကြောင်း သိရပါသည်။
အလားတူ ၃၂-၃၃လမ်းကြားနှင့် ၆၆-၆၇လမ်းကြားတွင် တည်ရှိသော လမ်းမြေအား ကျူးကျော် ခတ်ထားသော ပညာရေး လေ့ကျင့်ရေး တက္ကသိုလ်၏ အုတ်တံတိုင်း ကြောင့် လမ်းပိတ်ဖြစ်နေသော လမ်းသွယ်အားလည်း ၆၆လမ်းအထိ ပေါက်သော လမ်းသွယ်အဖြစ် ဖောက်လုပ်ပေးစေလိုကြောင်း ယင်းလမ်းသွယ်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးမှ CJMyanmar သို့ ပြောကြားပါသည်။
စစ်တွေဆိပ်ကမ်းသစ်စီမံကိန်းမှ ညပိုင်းတွင် ပိုင်တိုင်စိုက်ထူသည့်အသံဆူညံနေ
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJ Myanmar
စစ်တွေမြို့တွင် လက်ရှိတည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော စစ်တွေဆိပ်ကမ်းသစ်စီမံကိန်းမှ ညပိုင်းတွင် ပိုင်တိုင်စိုက်ထူသည့်အသံဆူညံနေသဖြင့်
အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်မှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းသို့ မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် 'ကျွန်တော်တို့မှာက အရင်တုန်းကတော့ အောက်ခံသဲခင်းတဲ့အဆင့်၊
အခုတော့ သဲခင်းတဲ့အပိုင်းကပြီးသလောက်နီးပါးဖြစ်သွားပြီ ဆိုတော့ ပိုင်တိုင်စိုက်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေပြီ။ ပိုင်တိုက်စိုက်တာကိုတော့ နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်းဆိုပြီး နှစ်ဆိုင်းခွဲလုပ်ပါတယ်။
အသံထွက်တဲ့ကိစ္စကျတော့လည်း ကျွန်တော်တို့က စီမံကိန်းကာလ အမှီပြီးအောင်လို့ စက်ယန္တရားကြီး တွေနဲ့တည်ဆောက်တာဖြစ်လို့ အသံဆူညံမှုတော့ရှိပါတယ်။'' လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆိပ်ကမ်းသစ်စီမံကိန်းအား အိန္ဒိယကုမ္ပဏီဖြစ်သော ESSAR မှ 2011 မှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး 2013-2014 လောက်တွင် ပြီးစီးမည်ဟုသိရသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ အိမ်တစ်အိမ်တွင်အမျိုးသားရေးနှိုးဆော်မှု စာတမ်း
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJMyanmar
မန္တလေး ၊ ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက်
မန္တလေးမြို့ရှိ အိမ်တစ်အိမ်တွင်အမျိုးသားရေးနှိုးဆော်မှု စာတမ်းရေးသားထားသော ဗီနိုင်းတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်ကို CJ တစ်ယောက်မှ တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM-1970
မန္တလေး ၊ ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်
မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝါဆိုခြင်းအလှခတ်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်မပျက် ကျင်းပလာခဲ့ရာ ၈၄ ကြိမ်မြောက် ဝါဆိုခြင်းအလှခတ်ပွဲတော်ကို ပထမဝါဆိုလဆန်း ၂ ရက်နေ့မှ စပြီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ခြင်းပွဲကွင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်။
ယခုနှစ် ဝါဆိုခြင်းအလှခတ်ပွဲတော်တွင် ခြင်းအလှခတ်အသင်းပေါင်း ၁၅၀၀ သင်းပါဝင်ဆင်နွဲကာ တစ်ရက်လျှင် ခြင်းအလှခတ်အသင်း ၃၀ သင်းနှုန်းဖြင့် ရက်ပေါင်း ၅၀ ခတ်ကစား ဖြေဖျော်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ပွဲတော်သို့ နယ်ဝေးအသင်း ၁၈၇ သင်းလာရောက်ပါဝင် ခတ်ကစားပြီး၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ ထိုင်း၊ ကနေဒါ နိုင်ငံများမှာ မြန်မာ့ခြင်းပညာ ဝါသနာရှင် အသင်းများပါ လာရောက်ပါဝင် ခတ်ကစားကြကြောင်း CJMyanmar မှ သတင်းရရှိသည်။ Posted by
မန္တလေးမြို့ နံနက်ခင်းများ၌ မန္တလေးကျုံးနှင့် မန္တလေးနန်းတော်မြို့ရိုးကြားတွင် တရုတ်ရိုးရာ ထိုက်ချိကျင့်စဉ် လေ့ကျင့်နေကြသူများ
မန္တလေးမြို့ နံနက်ခင်းများ၌ မန္တလေးကျုံးနှင့် မန္တလေးနန်းတော်မြို့ရိုးကြားတွင် တရုတ်ရိုးရာ ထိုက်ချိကျင့်စဉ် လေ့ကျင့်နေကြသူများကို တွေ့ရစဉ်
တို့.....ရင်ထဲကမန္တလေး ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုရဓာတ်ပုံမ...
မန္တလေးမြို့ ပရိယတ္တိသာသနဟိတအသင်း၏ (၁၀၆)ကြိမ်မြောက် ...
အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား ဂန္ဓကုဋီတိုက် အောက်တိုဘာလကု...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင...
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေး ကာကွယ်စောင့်...
မန္တလေးမြို့ ၃၂လမ်းနှင့် ၃၅လမ်းကြားတွင် လမ်းပိတ်အဖြ...
စစ်တွေဆိပ်ကမ်းသစ်စီမံကိန်းမှ ညပိုင်းတွင် ပိုင်တိုင...
မန္တလေးမြို့ နံနက်ခင်းများ၌ မန္တလေးကျုံးနှင့် မန္တလေး...
Myanmar Martyrs' Day 2012 (Mandalay)
Myanmar Martyrs' Day 2012 (Yangon)
စစ်တွေမြို့ရှိ အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်...
မန္တလေးတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား ခိုင်လုံမှုမရှိသည...
နောက်ကြည့်မှန် မန္တလေး ရောက်ရှိ
"စစ်တွေဈေးကြီးထဲသို့ လူဝင်ခွင့်ကဒ်နှင့်သာ ၀င်ခွင်...
မန်မာပြည်တွင် ပိဋက(၃)ပုံ နှုတ်ငုံဆောင်တော်မူနိုင်သေ...
၀မ်းတွင်းမြို့နယ် နေပူကုန်းရွာနှင့် ဆပ်ခင်းရွာကြား...
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေ ကျောက်စိမ်း/ ကျောက်မျက် ပ...
မော်လူး One Candle စေတနာရှင် အဖွဲ့ရဲ့ ပညာရေး စုပေါ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေကြောင်းလိုင်းအသစ်နှစ်ခု ထပ်မံေ...
မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်တွင် ဒီချုပ်ရုံးခ...
"ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ၄င်း၏ သမီးဆရာဝန်ကိုမူ ခ...
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး သဘင်ပညာရှင်များ အစည်းအရုံးဗဟိ...
အိမ်ရှင်မှ အိမ်တွင်အလုပ်လုပ်သူ မိန်းကလေးအား နှိပ်စ...
၇ ဇူလိုင် နှစ်၅၀ပြည့် အမှတ်တရ အခမ်းအနား
ဇူလိုင် (၆)ရက် နံနက်ပိုင်း ဂျက်ကီချန်း ၏ မန္တလေး ခရ...
ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ ညနေ ၇နာရီခွဲက မန္တလေးမြို့ ၆၂လမ်း၊ ...
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သည...
နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွ...
ယနေ့မန္တလေး အိုးဘိုထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ...
"ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်းများကို ရေရှည် ဖွင့်လှစ်ထားရှိ...
မန္တလေး၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်၊ ညနေ(၄နာရီ၅၀မိနစ်) တွင် သိပ...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့မှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့စခန်း
"မြန်မာ ၆ ဂိုး - ထိုင်ဝမ် (တရုတ်တိုင်ပေ) ၂ ဂိုး"
ကျွန်တော်သိသော ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ (ရိုဟင်ဂျာဘာလဲ.. ရို...
The Rohingya Problem I Know (What is Rohingya) By ...